ပေါချောင်ကောင်း အရမ်းကြိုက်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေကို ဂျင်းထည့်နေတဲ့လူတွေ | XYZ NEWS
ပေါချောင်ကောင်း အရမ်းကြိုက်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေကို ဂျင်းထည့်နေတဲ့လူတွေ
September 13, 2019 By Editoraknowledge
မြန်မာပြည်မှာမွေး မြန်မာပြည်မှာကြီးပြီး မြန်မာပြည်ကိုချစ်တဲ့ မြန်မာပြည်သား တရုတ်နွယ်ဖွားများကိုပဲ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်မိတ်ဆွေတွေလို့ ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့အထဲမှာ သူတို့ကို ထိခိုက်စေလိုစိတ် တစ်စက်မှ မပါဘူး။ စိတ်အနှောင့်အယှက် တစုံတရာ ဖြစ်စေခဲ့ရင် ကြိုပြီး တောင်းပန်ပါတယ်။
ဒီ Post ကိုရေးတဲ့ ကျွန်တော့ဆီမှာ တရုတ်သွေး တစ်မတ်သား ပါတယ်။ ပြည်မကြီးမှာ အငတ်ဘေး ဆိုက်တော့ ကျွန်တော့ အမေရဲ့ အဘိုးဟာ မြန်မာပြည်ကို ပြေးလာတယ်။ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ တွေ့ပြီး ပါလာတဲ့ တရုတ်ရိုးရာ အားလုံးကို ဓားနဲ့ခုတ်ပြီး ချောင်းထဲ မျှောပစ်လိုက်တယ်။ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖြစ်ခံယူတယ်။ ကွယ်လွန်တော့လည်း မြန်မာလိုပဲ သဂြုႋဟ်တယ်။
ပြောချင်တာက ကျွန်တော် တရုတ်သွေးနှောတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်မှာမွေးလို့ မြန်မာပြည်ကိုပဲချစ်တယ်။ ကိုယ့်ဇာတိချက်ကြွေ မွန်ပြည်နယ်ကိုချစ်လို့ မင်းဘာလူမျိုးလဲ လို့ မေးခဲ့ရင် #မွန် လို့တစ်လုံးတည်းဖြေတယ်။ တရုတ်သွေး နှောတယ်ဆိုတာကို မေ့ကိုမေ့ထားတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ တရုတ်သွေး နည်းနည်းလေးစပ်ပေမဲ့ မြန်မာပြည်ကိုစစ်စစ်မှန်မှန်ချစ်တဲ့မွန်တစ်ယောက်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အရှေ့အရပ်က အင်အားကြီးလာတဲ့ တရုတ်ကို ငါ့သွေးထဲ ဒင်းတို့လူမျိုး တစ်မတ်သားပါတာပဲ ဆိုပြီး ယောင်လို့တောင် ဦးညွှတ်စရာ အကြောင်း တစ်စက်မှကို မရှိဘူး။
နိုင်ငံရပ်ခြား ရောက်ဖူးကြတဲ့သူတွေသိလိမ့်မယ်။ မြန်မာတွေ အရောက်အပေါက် အလွန်များတဲ့ စင်္ကာပူ နဲ့ပဲ ဥပမာ ပေးမယ်။ စင်္ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်ချင်ရင် အနိမ့်ဆုံး Work Permit ရှိမှလုပ်လို့ရတယ်။ အလုပ်ဆိုတာ လခစား အလုပ်ကို ပြောတာနော်။
ဒါပေမဲ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဆိုလို့ အပေါဆုံး ချိုချဉ်ရောင်းတဲ့ သကြားလုံးဆိုင်လေးတောင် ဖွင့်ချင်တိုင်းဖွင့်လို့ မရဘူးဗျ။ လစာဒေါ်လာနှစ်ထောင်ကျော်ရတဲ့ S Pass ကိုင်တဲ့သူတွေ လစာဒေါ်လာသုံးထောင်ကျော်ရတဲ့ EP ကိုင်ထားတဲ့ သူတွေလည်း ကိုယ်ပိုင်ဆိုင် ဖွင့်ခွင့်မရှိဘူး။ Work Permit တို့ S Pass တို့ EP တို့ဆိုတာ ဝန်ထမ်းဖြစ်ခွင့်ပါမစ် အဆင့်ပဲ ရှိတာ။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ခွင့် ပါမစ်မဟုတ်ဘူး။ သကြားလုံးရောင်းတဲ့ဆိုင်လည်း ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးပဲ။ မရဘူး။ ဝန်ထမ်းပဲလုပ်။ စီးပွားရေး မလုပ်နဲ့။
သကြားလုံးရောင်းတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင် လောက် ဖွင့်ခွင့် ဆိုတာ စင်္ကာပူရီယန် နိုင်ငံသား မဟုတ်ခဲ့ရင် နိုင်ငံခြားသားဆို PR လို့ အတိုကောက်ခေါ်ကြတဲ့ Permanent Resident မြန်မာလိုပြောရရင် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရှိသူ ဆိုတဲ့ အဆင့်ရှိမှရတာ။ PR ဆိုတာမျိုးကလည်း လာလျှောက်တဲ့ တွေ့ကရာ လူတိုင်း ပေါက်လွှတ်ပဲစား ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အဆင့်ဆင့် အသေးစိတ် စိစစ်တာ။ PR ရပြီးတာတောင် အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့်ရှိသူ ဆိုပေမဲ့ နိုင်ငံခြားသားပဲ ဖြစ်နေသေးလို့ စင်္ကာပူရီယန်တွေထက် အဆပေါင်းများစွာ မြင့်မားတဲ့ အခွန်ကို ပေးရတာ။ သာမန်ဝန်ထမ်းဖြစ်ခွင့် ပါမစ်ပဲရှိတဲ့ (ရေးရတာ အားတော့နာတယ်။ လခစားဘဝမှာပဲ ရှိနေသေး သမျှတော့ မန်နေဂျာလည်း ဝန်ထမ်းပဲ။) WP တို့ S Passတို့ EP တို့လောက်ဆို စင်္ကာပူမှာနေရင် လင်မယား ဆို ကလေးတောင် မယူရဲလောက်အောင် အခွန်အခ များတာ။ ထားပါတော့ စင်္ကာပူနဲ့ယှဉ်ရင် ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ Loop Hole တွေများချက်ကတော့…….
ဟိုးတလောက မြေနီကုန်း စီးတီးမတ် အနားမှာ ဘာဝယ်ဝယ်ငါးထောင် လို့ဆိုင်းဘုတ်တင်ပြီး တရုတ်စာတမ်း တွေပြည့်နေတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွေ့လို့ ဝင်စပ်စုတယ်။ မေးကြည့်တယ်။ မြန်မာလို မပြောတတ်ကြဘူး။ တော်တော်ကြာမှ စကားပြန် ရောက်လာပြီး အမေးအဖြေလုပ်ရတယ်။ တကယ်တမ်းလည်း ဝယ်ဖို့သွားတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်တိုင်း ကိုယ့်ပြည်မှာ တရုတ်လို ဆိုင်းဘုတ်တင်တာတွေ့ရင် ခံပြင်းပြီး တင်းလွန်းလို့ ဝင်ပြီး ဆန်းစစ်တာ………
ရွှေတိဂုံဘုရား အနောက်ဘက် ပြည်သူ့ရင်ပြင်ထဲမှာ ပန်းအိုးတွေ အကြီးအကျယ်ရောင်းနေတယ်။ ဝင်မေးကြည့်တယ် မြန်မာလိုမတတ်ဘူး။ တရုတ်လိုဖြေနေတယ်။ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ထဲမှာ လာပြီးတော့များ ရာရာစစ…….. နာမည်ကြီးပြီး ဆိုင်ခွဲတွေ အများကြီး ဖွင့်နေတဲ့ ဆံသဆိုင် ထဲဝင်တယ်။ ဆံပင်ညှပ်ဆရာတွေ မြန်မာစကား တစ်လုံးမှ မတတ်ဘူး။ စကားပြန်က “အစ်ကို ဘယ်လိုပုံ လိုချင်လဲ” လို့ တရုတ်သံဝဲဝဲ နဲ့လာမေးတယ်။ အံကြိတ် ခေါင်းခါပြီး ထထွက် လာခဲ့တယ်……..
လမ်းလျှောက်ရင်း လက်ထဲကြော်ငြာလာထည့်တာက 18+ ပုံတွေ စာသားတွေ ဝေဝေဆာဆာနဲ့ တရုတ်ပြည်မှ ဆရာဝန်များ ကုသပေးနေသော အထူးကုဆေးခန်းကြီးတဲ့….ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလဲ….အဲ့ဒီ မြန်မာလိုတစ်လုံးမှ မတတ်တဲ့ တရုတ်တွေကို ဘယ်သူက မြန်မာပြည်မှာ ဆေးကုသခွင့် ဆမ ပေးလိုက်တာတုန်း? ဆရာဝန် အစစ်တွေရော ဟုတ်လို့လား? ဆေးခန်းထောင်ခွင့်ရော ဘယ်သူတွေကပေးလိုက်တာလဲ? ရန်ကုန် ဆေး(၁) ကနေ MBBS ဘွဲ့ရပြီး စင်္ကာပူမှာ ဆေးခန်းဖွင့်ခွင့် ပါမစ် သွားလျှောက်ကြည့်လိုက်လေ။ လွယ်သလား လို့သိချင်ရင်။ မြန်မာစကား တစ်လုံးမှမတတ်ဘဲ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ဆိုင်လာဖွင့်ရအောင် အဲ့ဒီတရုတ်တွေက ဘယ်တုန်းက မြန်မာပြည်မှာ အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့် PR ရသွားတာလဲ?
ပိုင်ရှင်က မြန်မာနိုင်ငံသား ဆိုရင်လည်း အဲ့ဒီတရုတ်တွေ ဘယ်လိုပါမစ်မျိုးနဲ့ လာလုပ်စားနေတာလဲ? ဒါမျိုးကို နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု FDI လို့ လာမပြောနဲ့။ လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံမှာကြည့်ကြည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဌာနေနိုင်ငံသား အချိုး ဘယ်လောက် ပါရမယ်။ မရှိမဖြစ်ပညာရှင်အဆင့်မှာမှ နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်ခန့်ရမယ်။ အဲ့ဒီကျွမ်းကျင်သူ နေရာအတွက် ဌာနေနိုင်ငံသားတွေ လုပ်နိုင်လာအောင် ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပေးရမယ်။ အရည်အသွေးမီလာရင် ဌာနေနိုင်ငံသားပညာရှင်ကို နိုင်ငံခြားသားနေရာမှာ ဘယ်လို အစားထိုးပြီး နည်းပညာကို ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ လက်လွှဲယူမယ် အစရှိသဖြင့် အမြော်အမြင်ရှိရှီစီမံကြတာချည်းပဲ…..
အခုတော့များ မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံခြားသား မျက်ပေါက်ကျဉ်း ပြည်ကြီးတရုတ်တွေ ပေါက်လွှတ်ပဲစား နေချင်သလိုနေ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ခွင့်ရနေတာ တာဝန်ရှိသူတွေ အလုပ်လုံးဝ မလုပ်ကြတာ သိသာလိုက်တာ။ ကိုယ်က ကွန်ပြူတာ မထုတ်နိုင်လို့ နိုင်ငံခြားက ထုတ်တဲ့ ကွန်ပြူတာကို ကျသင့်တဲ့ဈေးပေးပြီး ဝယ်ရတာ ပြဿနာ မဟုတ်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာစကားတစ်လုံးမှ မတတ်တဲ့ မျက်ပေါက်ကျဉ်း နှာခေါင်းပြားတစ်ယောက်ဆီမှာ စကားပြန်နဲ့ ဆံပင်ညှပ်လိုက်တိုင်း ကိုယ့်နိုင်ငံသား ဆံသဆရာလေး တစ်ယောက် ကိုယ့်ဆီက ဆံသခ ငွေမရတော့ဘဲ ထမင်းငတ်သွားရှာပြီ။ ဒါကို အမြဲနှလုံးသွင်းပါ…….. အရည်အသွေးမရှိတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို အဲ့ဒီငါးထောင်တန် ဆိုင်က ကိုယ်တစ်ခုခုဝယ်လိုက်တိုင်း ပစ္စည်းကောင်းကောင်းကို အဆင့်ရှိရှိ ရောင်းတဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံသားကုန်စုံဆိုင်လေး တစ်ဆိုင်ဟာ ကိုယ့်ကြောင့်ဝင်ငွေ ငါးထောင်လျော့သွားပြီ။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကို အဲ့ဒီနည်းနဲ့ ကိုယ်သတ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားပြီမှတ်ပါ။
တို့မြန်မာတွေ ပေါချောင်ကောင်း သိပ်ကြိုက်တတ်တာ ကုမရတဲ့ ရောဂါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် အဲ့ဒီလို ငါးထောင်တန် တရုတ်အစုတ်ဆိုင်မျိုးတွေတွေ့တိုင်း ဒီဂါထာကို သက်စေ့ နာနာရွတ်ပေး……”ပေါပြီးချောင်နေပြီဆိုတာနဲ့လုံးဝမကောင်းတော့ဘူး……..” လို့ ………………
ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲ သွင်းခဲ့တဲ့သူ၊ ဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့သူ၊ အဲ့ဒီဆိုင်မျိုးမှာ ပေါချောင်ကောင်းဝယ်တဲ့သူ၊ အရေးယူသင့် ရက်နဲ့ မယူဘဲ သိသိကြီးနဲ့ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေ အားလုံးကိုတော့…………….
Minn Aung Khant Zaw (လေးစားမှုဖြင့် ခရက်ဒစ်)
ဗစ်တိုးရီးယားလေးပြောတဲ့ တရားခံတွေကို ဘာဖြစ်လို့ ဖမ်းလို့ မရသေးတာလဲ?
အမေရိကန်ကို အစ္စရေးက သူလျှိုထည့်ကာ ထောက်လှမ်းနေပြီလား .. ?